Induction Preheating Welding Izithuthi Izithuthi Nge RF Heating System
Ikhaya / Izicelo / Ukukhishwa kwe-Induction / Induction Ukushisa Izingxenye Zokushisela Izithuthi
Isigaba: Ukukhishwa kwe-Induction Tags: lokungeniswa kwangaphambi kwezimoto, izingxenye zokufakwa kusendlalelo, ukukhipha ukushisa ukushisa, preheating lokungeniswa lokungeniswa, ukushisa ukushisa, preheating Welding uhlelo
Induction Ukushisa Izinsimbi Zokushisela Izithuthi Ngezinsimbi Zokushisa Zokungeniswa
Inhloso Ukushisa ngaphambili umthungo we-asi ye-truck ube ngaphezu kwama-300 ° F ngemizuzwana eyi-15 ngohlelo lokusebenza lokushisela nokugcina izinga lokushisa ngaphakathi kwendawo yokushisela amasekhondi ayi-15 ngemuva kokuthi amandla
Material Steel steel iloli axle; Ukushisa kwe-350 ° no-400 ° F okubonisa upende; I-350 °, 375 ° no-400 ° F okushisa okubonisa "amakhrayoni"
Isisetshenziswa se-DW-HF-35kW sokuphakelwa kwamandla kagesi, isiteshi sokushisa esikude esinama-capacitor amane we-1.2 μF kanye nekhoyili yokungeniswa eyenziwe ngokukhethekile.
Inqubo Isakhiwo sakhiwe ukuzungezisa i-axle 400 ° ngemizuzwana engu-15 futhi ikhoyili lokungeniswa labekwa ngaphezu kwe-axle. Umjikelezo we-asi (ngaphansi kwekhoyili) wawudwetshwe ngo-350 ° no-400 ° F okushisa okukhombisa upende. Ngenkathi i-ekseli lizungezwa, amandla we-RF asetshenzisiwe imizuzwana engu-15. Konke
kukapende kuyancibilika, kuqinisekisa ukuthi izinga lokushisa le-ekseli laliphezulu kuka-400 ° F. Amandla e-RF avaliwe futhi ama- “crayon” okushisa abekwa ngokushesha emelene ne-ekseli ukuqapha izinga lokushisa. Ikhrayoni elingu-400 ° F alizange lincibilike; ikrayoni elingu-375 ° F lancibilika imizuzwana engu-15; ikrayoni elingu-350 ° F lincibilikiselwe ama-30
Imiphumela I-ekseli lensimbi lafudunyelelwa ngaphezulu kuka-400 ° F ngemizuzwana eyi-15 futhi amazinga okushisa angaphezu kuka-350 ° F agcinwa imizuzwana engama-30 ngemuva kokucinywa kwamandla, kwahlangabezana nezidingo zohlelo lokushisela.
I-Preheat Eyisisekelo Esiphezulu Sokukhishwa Kwezingxenye Zokunyathela